Ukuhlola The Best Okutholakele Nge College Mates | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Ukuhlola The Best Okutholakele Nge College Mates
(Kugcine ukubuyekezwa On: 05/06/2020)
Kepha lapho ehamba kulo iviyo bekolishi, kulungile ngokuphelele ngeke ibe uhambo futhi nje izinto ngesikhathi osithandayo. Touring endaweni kungekho okulindele noma iyiphi ukuhlela ngaphambi empeleni indlela engcono kakhulu ukuthola ingcebo efihliweyo. It ishiya zingene mnandi futhi ukuhlola uncensored. Ngakho, lokho kuphi futhi buddies yakho uqale uma ufuna ukwenza okutholakele eyiqiniso ngaphandle kokuba eqinile-do-uhlu ukuze uphawu off? Ungabathola kanjani okwatholwa engcono ekhaya?
Awu, lucky ngawe, manje kungenzeka ukwenza inkohliso indiza ukubhuka visa ngaphandle kokuthi ekukhokheleni ithikithi lendiza noma travel uhambo. Lokho ikuvumela ukuba travel ngaphandle koxhumano uhambo. Ngaphandle kwalokho, zobuchwepheshe amabalazwe kanye isiqondiso ekuphileni kalula, ukuze ukwazi athembele ngokugcwele ifoni yakho ngamathiphu okuhamba. Nazi 5 amanye amathiphu lokuhlola okutholakele engcono nekholiji bomshado:
1. Joyina Uhambo Lokuhamba Lomahhala
Ukucinga futhi ubhalise for free ukuhamba izinkambo ngosuku lwakho wokuqala edolobheni entsha. Ziyakwazi kulula ukuthola – nje cela zamalungu abasebenzi ehhotela uzobe nilala lokuqala, noma ubuze kusukela nezinye izihambi umfundi uthola ehostela yakho. A Ukucinga Okusheshayo kwi-inthanethi izokusiza ukuthola okuhle khulula ukuhamba tour. Qaphela ukuthi nakuba izinkambo ngokuyinhloko mahhala, kungcono ukuthi ubekele eceleni isabelozimali esincane ukuqondisa izinkomba zokuvakasha.
kanjani ukuhamba khulula izinkambo umsebenzi? Uthola khulula ukuhamba tour ngoba usuku nesikhathi lapho kuzotholakala, ubhalisa, iphuzu mhlangano sixhumane nawe, ubonisa kuze ngaleso sikhathi ngesikhathi, bese ushiya konke okunye kuya tour guide. ingabe onekhono tour guide ukukusiza ukuthola edolobheni futhi emaphethelweni alo kalula futhi ukuyiqonda ngokujulile we sika idolobha izakhiwo esiyingqayizivele futhi isiko lendawo.
2. Vumela Wena Ukuze Get Lost
Manje njengoba i abanolwazi tour guide eye yakusiza ngayo ukuthola ezingxenyeni eziningi edolobheni, manje isikhathi sokuthi enxanxatheleni esiteshini okungahleliwe futhi uhlole indawo uwedwa. Ngamabomu ukugwema izindawo touristy futhi "ulahleke" olwandle zabantu. Futhi ngenxa yokuthi wena nabangani, ungenawo ukuba bakhathazeke kakhulu ngokuphepha siqu. Uyothola ezingenakubalwa amagugu afihliwe – izinto akukho izivakashi oke wabona ngaphambi. Kuyokusiza uma avulekele ukukhuluma nabantu abangabazi ngoba akekho kuzokusiza ukuthi uthole idolobha ungcono abendawo.
3. Sebenzisa i-Google Amamephu
Amamephu weGoogle noma amamephu we-Apple kulungile, yize i-Apple ingakwazi ukushaya ukuqagela nokunemba kwamamephu we-Google. Mhlawumbe kungenxa yokuthi abasebenzisi kakhulu internet baye amadivaysi Android-powered, ngakho kakhulu yizivakashi Izibuyekezo zenziwa ku-Google amamephu. Ukutadisha-Google imephu imisebenzi endaweni kahle ngempela iqembu wokujikeleza – Inikeza umqondo esiphelele yini okuzungezile. Izibuyekezo ze-Google uzokutshela ezindaweni zokudla, lapho ukuthola elimnandi, futhi baxwayisa wena kuphi hhayi ukuvakashela njengoba umhambi ekolishi. Lolu lwazi lusiza uyihlola uphinde uthole okuningi.
4. Emihlanganweni Imicimbi Local
Uma ungafuni ukuba bahambe bodwa emigwaqweni ngaphandle kwenjongo esibekiwe, kungani abengezanga umcimbi lendawo ke? Buza azungeze i-imibuthano yezohwebo, art imibukiso, amakhonsathi, noma imikhosi futhi Gxila phi of them. Uma nithanda ezemidlalo, ukuya yezemidlalo noma khona kwakuzoba nomdlalo webhola emgwaqweni. Ungadlala ngisho ne bendawo uma ngokwanele wokungenisa izihambi. Lokhu kuzokwenza ube nombono ojulile edolobheni futhi akuvumela ukusebenzisana ne bendawo futhi uhlangabezana nokuzabalaza kwabo kwansuku zonke futhi nezinjabulo – efana lendawo. Qalisa webanga uma uthemba ukugijima ikhono lakho. Ukuncintisana bomshado yakho kuzokwenza kube mnandi nakakhulu.
5. Thola Social Media
Facebook Izibuyekezo uzokutshela lapho ukuya Backpacking nabangani ekolishi, lokho ukuthola lisekhona, nakho konke kudingeka ukuba ukwazi ukuthi uya khona. Mane ujoyine ikolishi iqembu labahambi lokukhetha kwakho, bathi ku-Facebook, bese ukhetha izingqondo amalungu onolwazi. Izingosi Zokuxhumana kuyinto emayini yegolide sokuqoqa ulwazi olusemqoka esuka kubantu abanolwazi mathupha ngoba kusifunda esinikeziwe.
ukuze uphethe, Nsuku zonke kuba ukufunda ithuba nganoma yisiphi iqembu wokuvelela abasha ekolishi abahambi. Nje ukuhlelwa okufanele yakho umshuwalense wezempilo kanye nohambo, kodwa asigcini ngokwakho nge uhambo fixed. Ake self yakho ukwazi abasha ukuhlola bese bethola futhi uma bathandile athikili yethu, ke oda amathikithi isitimela esuka Londoloza Isitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Ukuhlola The Best Okutholakele Nge College Mates” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/discoveries-college-mates/ ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngo isixhumanisi esilandelayo, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- lokhu kuxhumana ukuze IsiZulu imizila amakhasi okufikela, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha pl ukuze fr noma de futhi ngezilimi ezingaphezu olikhethayo.
College College Mates Okutholakele Izikhangibavakashi Travelingtips
I am a umhlaziyi ibhizinisi, futhi umfundisi zezimali obelokhu ucwaninga self-ukuthuthukiswa ngoba eminyakeni emibili edlule futhi manje sivaliwe ukuhamba emhlabeni. Nami ngiyiyo webanga elide futhi owabeke egijima Elikhulu Wall Marathon njengoba umgomo esaphila! ukuphila kwami ​​elizimisele ugqozi abanye ukuba amaphupho abo. - Ungakwazi uchofoze lapha ukuze ngithinte